Fanamarinana - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
"Vonona izahay hanana fiainana salama."
—— Tale Jeneraly, Shaowei Wang
▍ Mba hiadiana amin'ny coronavirus dia nanao fanitsiana haingana ny lamin'ny famokarana izahay. Ny foibem-pamokarana sarontava dia hita tao anatin'ny 3 herinandro latsaka izay nahazo tombony tamin'ny fanamboarana fitaovana fitsaboana anay.
▍ Ankehitriny dia manana fahaizana famatsiana 3 tapitrisa pcs / andro izahay ary eken'ny FDA (Dusk Mask) & CE (Sarom-pitsaboana). Vonona foana izahay ny hanome mari-pankasitrahana ho an'ireo mpiaramiasa, ary manantena ny hiara-miasa amin'ireo orinasa rehetra mila sarontava sy fitaovana fitsaboana hafa.
Ao amin'ity pejy ity:
Details Antsipiriany fonosana amin'ny sarontava
▍ Fampisehoana varotra
Ho an'ny sarontava:
Lisitra No. .: D374833 (Kaody: LYU)
Anarana: Sarontava fitsaboana
CE Nosoratan'i SUNGO
Referansa No. .: 20200627
Fanombanana ny orinasa:
Seza misy kodiarana & Scooters:
▍ Antsipirian'ny fonosana saron-tava
▍ Isaky ny saron-tava dia ho azo antoka fa tsy ho tapaka amin'ny fitaterana. Ny antsipirian'ny fonosana dia aseho etsy ambany (na ny fonosana anatiny na ivelany). Azonao atao koa ny mifandray aminay mba hahazoana fanazavana bebe kokoa.
Tongava mpiaramiasa aminay, hamorona ravina tsara kokoa.
—— Ao amin'ny Rehacare, 2019
JBH Medical, afaho ny ainao
sarontava tarehy, saron-tava azo ampiasaina, fandriana azo ovaina ho an'ny marary, mpanandratra marary hydraulic, fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana, mpamonjy marary marary herinaratra,
fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana, sarontava tarehy, saron-tava azo ampiasaina, mpamonjy marary marary herinaratra, mpanandratra marary hydraulic, fandriana azo ovaina ho an'ny marary,